ITunes ကို | November 2019
ITunes ကတဆင့်သင့်ရဲ့ iPhone ကနေဂီတကိုဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို
ITunes ကိုအလုပ်လုပ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, အသုံးပြုသူများအစီအစဉ်၏အချို့လုပ်ငန်းဆောင်တာများအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးမျိုးသောကိစ္စများကြုံတွေ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ယခုဂီတ iTunes ကိုသုံးပြီးဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်မည်သို့ iPhone ကို၏မေးခွန်းကိုမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ဖြစ်ကြသည်။ iTunes ကို - တစ်လူကြိုက်များ mediakombayn က Apple-ကွန်ပျူတာကိရိယာများပေါ်တွင် run ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်။
အဘယ်သို့ငါ iTunes ကိုအတွက်ဖွင့်စာရင်းများကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး
ကွဲပြားခြားနားသော Apple ကကိရိယာများအတွက်ဂီတ၏အဖှဲ့အစညျး၏အဆင်ပြေဘို့, မည်သည့်ခံစားချက်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အပုဒ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း, iTunes ကို၌သငျဂီတသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းများစာရင်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်သောသီချင်းစာရင်းများကိုဖန်တီးရန် function ကိုထောက်ပံ့ပေး, သင်ဖိုင်တွေပြသစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပုံကိုစိတ်ကြိုက်, သူတို့တောငျးဆိုနိုငျဘယ်မှာ လိုချင်သောအမိန့်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသင့်ရဲ့ iPhone, iPod, iPad ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
များသောအားဖြင့် Apple ရဲ့-device ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတှကျအသုံးပွုသော Windows နဲ့ Mac OS ကိုအပြေးကွန်ပျူတာများ, အဘို့ ITunes- လူကြိုက်များ mediakombayn ။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ Apple ကကိရိယာနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာကနေလွှဲပြောင်းဓါတ်ပုံကိုခွင့်ပြုလတံ့သောလမ်းကိုကြည့်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှ Windows အတွက် iTunes က software ကို Apple က-device ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအသုံးပြုသည်။
ITunes ကိုအတွက်ဆေးတစ်လက်မှားယွင်းနေသည် 21
အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အရာနှင့်အတူနီးပါးတိုင်းအသုံးပြုသူအလုပ်မှာ, ပရိုဂရမ်၏သူတို့အားမျိုးထဲကတစ်ခု, ဒါပေမယ့်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းမှားယွင်းမှုတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ - အတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်, သို့သော်, Apple ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး iTunes ကို software ကိုအများကြီးကြားရကြပြီ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှား 21. မှားယွင်းနေသည် 21 troubleshoot ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်, ပုံမှန်အားဖြင့် Apple ရဲ့ကိရိယာကြောင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအမှားမှတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာ iTunes ကိုမှတဆင့် iPhone ကို restore ပါဘူး: ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ
စည်းကမ်းအဖြစ်, iTunes ကိုဆော့ဖ်ဝဲ restore လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖို့, ဥပမာ, သင့်ကို Apple-device ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသုံးပြုသည်။ ဒီနေ့က iPhone, iPod, iPad ကို iTunes မှတဆင့်ပွနျလညျထူထောငျမရသောအခါပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အဓိကနည်းလမ်းမှာကြည့်ပါ။ ကကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Apple က-device ကို restore လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းပြချက် iTunes နဲ့ပြီးဟာ့ဒ်ဝဲအမှား၏ banal ခေတ်မမီတော့ဗားရှင်းနဲ့အတူစတင်အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
ITunes ကတဆင့် iPhone ပေါ်မှာလျှောက်လွှာကို install လုပ်နည်း
IOS ကိုကိရိယာရာများစွာကိုပလက်ဖောင်းမှသီးသန့်ရှိပါတယ်, အရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းများနှင့် applications များ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးထူးခြားပြောင်မြောက်ဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့ကို iTunes ကနေတဆင့် iPhone, iPod ကိုသို့မဟုတ် iPad အတွက် application များ install လုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ iTunes ကဖြစ်ပါတယ် - သင်က Apple-devices များအပေါငျးတို့သရရှိနိုင်အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အတူကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်စုစည်းဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ပေါ်ပြူလာကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သို့ငါ iTunes ကိုအားဖြင့်သင်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး
ITunes ကိုဆော့ဖျဝဲ - သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကနေ Apple က-devices များစီမံခန့်ခွဲခြင်းရှိကြသည့်နှင့်အတူတစ်ဦးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဤအစီအစဉ်မှတဆင့်သင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်မှာရှိသမျှဒေတာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, ဤဆောင်းပါးကိုငါတို့သည် iTunes ကိုတဆင့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch ကိုကနေဓါတ်ပုံတွေကိုဖျက်ဖို့ဘယ်လိုမှာကြည့်ရှုမည်။
ITunes ကိုအတွက်ဆေးတစ်လက်မှားယွင်းနေသည် 54
အမှားအမျိုးမျိုးမှားယွင်းမှုတစ်ခုသို့ဘာသာပြန်ဆိုပေးသောစနစ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ iTunes ကိုခုနှစ်တွင်ကံကောင်းထောက်မစွာ, တိုင်းအမှားပြဿနာကိုဖျက်သိမ်းရေး၏ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းစွာအရာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်, ရှိပါတယ်, အဲဒီမှာအမှားအယွင်းများများအတွက်ရွေးချယ်စရာကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်။ အထူးသဖြင့်, ဤဆောင်းပါး၌အမှားကုဒ် 54 နှင့်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
ITunes ကိုအတူလုပ်ကိုင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်ရံဖန်ရံခါ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမှားများ, ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကုဒ် 1671. အမှားကုဒ် 1671 နှင့်အတူအမှားဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်ယနေ့သင့်ရဲ့ device ကို iTunes ကများအကြားဆက်သွယ်မှုအတွက်ပြဿနာတစ်ခုရှိကွောငျးထိုအဖြစ်အပျက်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ITunes ကိုအတွက်ဆေးတစ်လက်အမှား 3014
ITunes - ကွန်ပျူတာပေါ်မှာက Apple-devices များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဲ့လူသိများတဲ့ mediakombayn ။ တိကျတဲ့ကုဒ်တွေနဲ့မှားယွင်းမှုတစ်ခုကို screen ပေါ်မှာပြသလျှင်ကံမကောင်းစွာပဲအမြဲတမ်းအစီအစဉ်တွင်သတ်မှတ်ထား task ကိုအောငျမွငျနိုငျဘူး။ ဤဆောင်းပါးသည် iTunes ကိုအတွက်အမှား 3014 ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်, iTunes ကိုသင် program ကိုနားထောင်ရန်နိုငျသောဂီတသိုလှောင်ရန်အသုံးပြုသည်အဖြစ် Apple ထုတ်ကုန် (iPhone, iPod, iPad, etc) မှကူးယူ။ ဒီနေ့ဒီ program ထဲကသင်တို့ရှိသမျှသည် ADDED ဂီတဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုပါ။ iTunes ကဖြစ်ပါတယ် - မီဒီယာကစားသမားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မယ့်စွယ်စုံ Processor ကိုသင် iTunes ကို Store မှဝယ်ယူမှုစေရန်ခွင့်ပြုနှင့်သင်တန်း၏, ပန်းသီး gadgets သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အတူတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်။
သငျသညျ iTunes ကို install လုပ်သည့်အခါမှားယွင်းနေသည် "installer ကို iTunes ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမရောက်မီအမှားများကိုတွေ့ရှိရ"
ကျနော်တို့ iTunes ကိုသုံးပြီး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအမှားအယွင်းများအမျိုးမျိုး၏တရားမျှတသောငွေပမာဏရှိကျွန်ုပ်တို့၏ site မှာကြည့်ရှုကြ၏။ အသုံးပြုသူ pop-up လုပ်ဖို့အမှားကြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ iTunes ကို "installer ကို iTunes ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမရောက်မီအမှားများကိုတွေ့ရှိရ" ကိုမတပ်ဆင်နိုင်သည့်အခါဒီနေ့, အမည်ရတစ်ဦးအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောပြဿနာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် iTunes ကို software ကိုအပေါ်အသုံးပြုမှုအတွက်, သင်အလုပ်ပြီးအောင်တားဆီးကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒီနေ့အမည်ရကဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်သောအခြေခံနည်းလမ်းများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အမှားကုဒ်9ရက်နေ့ကအသေးစိတ်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ Apple ကကိရိယာကို update သို့မဟုတ် restore ပြန်သည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်, ပန်းသီး gadget က၏အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးကုဒ်9နှင့်အတူမှားယွင်းမှုတစ်ခုရင်ဆိုင်။
OS ကို Windows အတွက်အခြားမည်သည့်အစီအစဉ်သည်လိုပဲ, iTunes ကိုအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားမဟုတ်ပါဘူး။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှတစ်ဦးချင်းစီကိစ္စကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကအများကြီးပိုလွယ်ခွင့်ပြုမယ့်ထူးခြားတဲ့ကုဒ်တွေနဲ့မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ iTunes ကိုအတွက်အမှား 4005 fix ဖို့ဘယ်လိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ဆောင်းပါးဖတ်ပါ။ မှားယွင်းနေသည် 4005 များသောအားဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ် Apple က-devices များပွနျလညျထူထောငျလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုပြဿနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ: iTunes ကို iPhone ကိုမမြင်ရပါဘူး
စည်းကမ်းနှင့်အမျှသုံးစွဲသူအများစုမှာကွန်ပျူတာက Apple-နားချင်းဆက်မှီကိရိယာ iTunes ကိုသုံးပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်ကို iTunes က iPhone ကိုမမွငျပါဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှန်း၏မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ iTunes ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုမမြင်ရပါဘူးကြောင့်အရာမှအဓိကအကြောင်းရင်းများမှာကြည့်ပါ။
ITunes ကတဆင့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod ကို Restore လုပ်နည်း
ပြဿနာတစ်ခုကို Apple-device အတွက်ဖြစ်ပေါ်, သို့မဟုတ် iTunes ကနေတစ်ဆင့်ရောင်းချဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်ဆိုပါကဝယ်ယူပြီးနောက်အဖြစ် device ကိုသန့်ရှင်းတဲ့အောင်, ကိရိယာအပေါ် Re-install သည့် firmware ကိုခွင့်ပြုရသော recovery procedure ကို, ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ iTunes ကိုမှတဆင့်အိုင်ပက်နှင့်အခြား Apple က-device ကို restore ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့, ဆောင်းပါးဖတ်ပါ။
ITunes ကိုအတွက်ဆေးတစ်လက်အမှား 2003
အမှားများကို iTunes ကိုအတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါ - ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, အတော်လေးမနှစ်မြို့ဖွယ်တစ်ဦးအလွန်ဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်းများနှင့်။ သို့သော်အမှားကုဒ် သိ. သင်ပိုမိုတိကျစွာ၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏အကြောင်းရင်းဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အရှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ပြဿနာများသင့်ရဲ့ PC ကို၏ USB အ-connection ကိုအတူပေါ်ပေါက်လာသောအခါအမှားကုဒ် 2003 မှားယွင်းနေသည် 2003 code က iTunes ကိုအသုံးပြုသူများသည်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
လုံးဝမဆို software ကိုနောက်ဆုံးမှာသေချာပေါက် installed ရမည်ဖြစ်သည်တစ်ခု update ကို, ရရှိသွားတဲ့။ ပထမတစ်ချက်မှာအပြီးအပ်ဒိတ်ပရိုဂရမ်ကိုမပြောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်အသီးအသီး update ကိုအဓိကအပြောင်းအလဲများကိုယူဆောင်လာ: မျက်စိမှ imperceptible ကဲ့သို့တိုးတက်မှုဖြည့်စွက်, ပိတ်ပွဲပေါက်တွေ, optimization ။
ITunes ကိုဖိုင်ကို Library.itl နှင့်အတူ iTunes ကိုအမှား fix လုပ်နည်း
စည်းကမ်းအဖြစ်, iTunes ကိုအလုပ်အတူပြဿနာအများအပြားလုံးဝအစီအစဉ်ကို reinstall ဖြေရှင်း။ သို့သျောယနေ့မျက်နှာပြင်တခုတခုအပေါ်မှာအမှား iTunes ကို "File" Library.itl iTunes ကိုဖွင့်လိုက်ပါဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအသုံးပြုသူရှိရာအခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည် "က iTunes ကို၏ပိုသစ်သောဗားရှင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောကြောင့်ကိုဖတ်မရပါ။ "